Jubbaland oo war ka soo saartay xaalad bani’aadanimo oo ka dhalatay loolanka Gedo – Hornafrik Media Network
Jubbaland ayaa war-saxaafadeed kasoo saartay kulan ay xubno ka tirsan labada gole maamulkaas ku yeesheen degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo, sida lagu sheegay qoraalka.
Warkan waxaa lagu sheegay in kulankaas lagu lafa guray xaladda siyaasadeed ee ka taagan magaalooyinka Dolow, Beled-Xaawo, Luuq iyo Baardheere oo ka wada tirsan gobolka Gedo, isla markaana ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka ee dhawaan lagu daabulay gobolkaas.
Jubbaland ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in xaalad halis ah oo bani’aadannimo ay ka taagan tahay gobolka, taas oo ay aad uga walaacsan tahay ka maamul ahaan.
Maamulka Jubbaland ayaa qoraalkan ka soo baxay ku sheegay in dad u dhaxeeya 15-20 kun oo qoys ay ku barakaceen xaaladaha cakiran ee ka jira gobolka Gedo, kuwaas oo wajahaya biyo la’aan xoog leh, xilligan oo lagu jiro waqtigii kuleylaha.
23-kii bishan ayey sheegtay Jubbaland in ciidamada dowladda Soomaaliya ay diideen in diyaarad samafal oo gargaar sidday ay ka degto garoonka degmada Doolow oo gacanta ku hayaan.
Waxay sidoo kale sheegtay inay geeriyoodeen bukaano badan, sababo la xiriiro xayiraadda saaran gobolka, kadib markii loo qaadi waayey magaalada Muqdisho oo ah halka loo soo doonto adeegyada caafimaad ee ugu tayada roon dalka.
Arrimahan ayay Jubaland sheegtay in ay ka dhasheen khal-khalka siyaasadeed, kan amni iyo midka maamul ee dowladda federaalku ay ka abuurtay degmooyinka gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya.
Jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeysay in weli faragalin siyaasadeed iyo khal-khal amni ay ka wado gobolka Gedo, isla markaana ay meel iska dhigtay dastuurkii dalka iyo hanaankii federaalka ee Soomaalidu ay ku heshiisay.
Ugu dambeyntii Jubbaland ayaa waxgaradka Soomaaliyeed, siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ka dalbatay in ay soo fara geliyaan xaaladda muragsan oo ay sheegeen in ay ka jirto gobolka Gedo, taas oo ay ku eedeeyeen in ay abuurtay dowladda federaalka Soomaaliya.